ကိတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားကပြ လိုက်တဲ့ ပုရိသတို့အချစ်တော် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Yoe
ကိတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားကပြ လိုက်တဲ့ ပုရိသတို့အချစ်တော် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ဒါ က တော့ ရင်ခုန် သံတွေ မြန်ဆန် သွား ရလောက် အောင် အမိုက်စား ပို့စ်တွေ ပေးနေပြီး ဆွဲဆောင်မှု တွေ ရှိလွန်းနေ တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်. .။ သူမ ဟာ ဂျင်းဘောင်းဘီ အကျပ် လေးကို ဝတ်ဆင် ထားတာ ကြောင့် ကျစ်လစ် သွယ်လျ တဲ့ ကိုယ်လုံး အလှတရား တွေက ပိုမို ပေါ်လွင် နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်.. ။ ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့် ရှု ခံစား နိုင်အောင် နန်းမွေစံ ရဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက်ပေး လိုက် ရပါ တယ် နော်…
အချိုး အစား ပြေပြစ် လွန်းပြီး ရင်သပ် ရှုမော ရလောက် အောင် ဆွဲဆောင် နိုင်လွန်းတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံး လေး ကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ တစ်ခဲ နက် ဝန်းရံ အား ပေးခြင်းကို ရရှိ ထားသူကတော့ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမ ဟာ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် အ ဖြစ် တစ်စိုက် မတ်မတ် ရပ်တည် နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်.. ။ ဝါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပ် တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း နဲ့ သူမရဲ့ ဘဝလေး ကို ပျော်ရွှင် စရာ ဖြတ် သန်းနေ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှု တွေ များစွာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရ သော် လည်း မမှု ဘဲ ရှေ့ဆက် ရမယ့် အနုပညာ ပန်းတိုင် ကို မရောက် ရောက် အောင် လျှောက် လှမ်း နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမ ရဲ့ ပရိသတ် ကြီး အတွက် လည်း အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေကို မကြာ ခဏ တင်ပေး နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ မနေ့ည က လည်း နန်းမွေစံ ရဲ့ Instagram လူမှု ကွန်ယက် မှာ ပုံလေး တစ်ချို့ ကို ဝေမျှထား တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
source and photo crd : Nang Mwe San ’ s IG Account
အသည်းယားစရာ ကောင်းအောင် ပို့စ်တွေပေးနေ တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ဗီဒီယို
အလှတရားတွေ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ အမိုက် စား ရိုက်ကူးထား တဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယိုများ
သူမ တစ်သက်ဘယ်တော့မှ မေ့မရတော့ တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကို ဝမ်းနည်းစွာ နဲ့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ထားထက်ထက်
သရုပ်ဆောင်နေအောင်ကွယ်လွန်ပြီလို့ သတင်းအမှား အကြောင်းကို သေချာရှင်းပြ လိုက် တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင်